BUDDHIST TERMS' Dictionary: FIVE OBSTRUCTIONS - စေတောခိလ
FIVE OBSTRUCTIONS - စေတောခိလ
FIVE OBSTRUCTIONS IN THE MIND Cetokhila
စေတောခိလ - ရဟန်းစိတ်ဝယ် မပယ်စွန့်ရသေးသော ဆူးငြောင့်ခလုတ်ငါးမျိုး။
မပယ်ရသေးသော စိတ်၏ဆူးငြောင့်ခလုတ် (စေတောခိလ) ငါးမျိုးတို့မှာ -
(၁) ရဟန်းသည် မြတ်စွာဘုရား၌ ယုံမှား၏၊ တွေးတော၏၊ မဆုံးဖြတ်နိုင်၊ စိတ်မရှင်းလင်း၊
(၂) ရဟန်းသည် တရား၌ ယုံမှား၏၊ တွေးတော၏၊ မဆုံးဖြတ်နိုင်၊ စိတ်မရှင်းလင်း၊
(၃) ရဟန်းသည် သံဃာ၌ ယုံမှား၏၊ တွေးတော၏၊ မဆုံးဖြတ်နိုင်၊ စိတ်မရှင်းလင်း၊
(၄) ရဟန်းသည် အကျင့်သိက္ခာ၌ ယုံမှား၏၊ တွေးတော၏၊ မဆုံးဖြတ်နိုင်၊ စိတ်မရှင်းလင်း၊
(၅) ရဟန်းသည် သီတင်းသုံးဖေါ်တို့၌ အမျက်ထွက်၏၊ မနှစ်သက်၊ စိတ်နာတတ်၏ ဆူးငြောင့်ခလုတ်သဖွယ် ဖြစ်၏။
Obstructions in the mind ofabhikkhu which have not been got rid of
1.abhikkhu has doubt, perplexity, uncertainty, and lack of clarity concerning the Teacher (i.e, the Buddha).
2.abhikkhu has doubt, perplexity, uncertainty, and lack of clarity concerning the Dhamma.
3.abhikkhu has doubt, perplexity, uncertainty, and lack of clarity concerning the Saṁgha.
4.abhikkhu has doubt, perplexity, uncertainty, and lack of clarity concerning the practice of training oneself.
5.abhikkhu is angry, displeased, sore at heart and fractious with his companions in the practice of the dhamma.